ओलीलाई साथ दिए जसपा फुट्ने ! « Janata Samachar
ओलीलाई साथ दिए जसपा फुट्ने !
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनमा निणार्यक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा नयाँ सरकार गठनमा थप अन्योलता देखिएको छ । पार्टीको विवादकै कारण जसपाले हालसम्म केपी शर्मा ओलीकोे सरकारलाई साथ दिने की नयाँ सरकार बनाउँने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
जसपा केपी ओलीको पक्षमा उभिए एमाले र जसपाको सरकार बन्ने छ भने विपक्षमा उभिए माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने छ । तर उ पार्टी भित्रको विवादका कारण अनिर्णित छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीलाई साथ दिन नहुने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो माग पूरा भए ओलीलाई नै साथ दिनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्
दुई पक्षको यहि विवादका कारण जसपा भित्र विभाजनको रोखा कोरिन थालेको छ भने पार्टी अनिर्णित बनेको छ । तर, जसपा आफूहरु अनिर्णित हुनु पछाडी पार्टीको विवाद भन्दा अरु दललाई दोष दिएर पन्छिने गरेको छ ।
बिहीबारको संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महत्तोले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका कारण समस्या बढेको दाबी गरे । महतोेले आफूहरु कुनै बाधक नभएको र सरकारमा जाने आफूहरुको मुद्धा नै नभएको बताउनुभयो । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने, कांग्रेस अविश्वासको पत्र पनि नल्याउने अनि आफूहरुलाई दोष दिनुको कुनै तुक नभएको उहाँको भनाइ छ ।
जसपाका नेताहरुले माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिइ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी नबढ्ने भएकाले यस विषयमा आफूहरु अग्रसर हुन नचाहेको बताउँने गरेको छन् । माओवादीले ओलीको चर्को आलोचना गरे पनि अझै उहाँलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन् । यस्तै जसपाले कांग्रेसको अलमलका कारण पनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीसंग मिलेका कारण यो सबै अलमल भइरहेको दाबी गर्छन् ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने समस्या जसपा रहेको तर दोष अरुलाई दिने गरेको भन्दै जसपाको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने गरेका छन् । आफ्नो पार्टी भित्रको विवादका कारण निर्णय लिन नसक्ने, हिजो जसकाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको थियो आज उसैलाई बालुवाटार जाने तर दोष अरु दललाई दिने जसपाको प्रवृति नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको कांग्रेस गगन थापाको टिप्पणी छ । जसपाले यही सरकारलाई समर्थन गर्ने हो वा नयाँ सरकार गठनमा जाने हो भन्ने बारे स्पष्ट निर्णय नगरेकै कारण राजनीतिक अन्योलता बढेको थापा बताउनुहुन्छ ।
तीनवटा विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकै ठाउँमा उभिएको अवस्थामा मात्रै नयाँ सरकारका लागि बहुमत पुग्ने छ । माओवादी र कांग्रेसले ओली सरकरा ढाल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर, जसपा अहिलेसम्म अनिर्णित छ । यो अनिर्णयको मुख्य कारण जसपामा देखिएको विवाद हो ।
जसपाभित्रै पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो एक ओलीसँग मिल्न तयार देखिएका छन् भने पूर्वसमाजवादी पार्टी अर्थात उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराइ ओलीसँग मिल्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । यहि कारण जसपा अन्योलमा परेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो भेटमा जसपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर समेत गरेका कारणले पनि जसपा अनिर्णित देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाएर ओली जसपालाई यसैगरी अल्झाउँने र त्यसको लाभ लिने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
जब सम्म जसपाले निर्णय गर्दैन तबसम्म माओवादी पनि समर्थन फिर्ता लिइहाल्ने मनस्थितिमा छैन् । यसको लाभ पनि ओलीलाई नै मिल्ने छ । यदी माओवादीले निर्णय गरे जसपा विभाजित गरेर भए पनि ओली पूर्व राजपालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ । पूर्व राजपा पनि परिआए पार्टी फुटाउने सम्मको मनस्थिति छ । पूर्व राजपासँग मात्रै १६ सांसद छन् । उहाँले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि ओली सरकार टिक्ने सम्भावना बलियो हुने छ । ओलीको यहि रणनीतिका कारण पनि जसपा अनिर्णित र विभाजित हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।